Kuvele kungenzeka ukuthi kwenziwe amadrayivu anzima alingane ne-athomu | Izindaba zamagajethi
Enye yezinkinga ezinkulu zobuchwepheshe umphakathi wanamuhla onazo, ngaphezu kokuzimela kwamabhethri, ukuthola ubuchwepheshe obusha obusivumelayo gcina inani elikhulu lemininingwane esikhaleni esincane kakhulu ngaphandle kokulahlekelwa, noma nokwandisa, isivinini sokudluliswa kwedatha.
Ukucabangela umsebenzi wakamuva owethulwe ngu UFabian natterer, isazi se-physics eSwitzerland Federal Institute of Technology eLausanne, kusobala ukuthi lokhu kuzoba seduze kakhulu kunalokho esikucabangayo ngenxa yokuthi kungenzeka gcina idatha ezingeni le-athomu. Okwamanje singagcina kuphela izingcezu ezi-2 ku-athomu kepha lokhu kuminyana kungakhuphuka kuze kube izikhathi eziyi-1.000 XNUMX ezingasivumela, ngokwesibonelo, ukuthi sikwazi ukugcina ikhathalogi yamanje ye-iTunes kudivayisi enkulu njengekhadi lesikweletu.
Izinyathelo zokuqala zithathwa ukuthuthukisa ama-hard drive drives.
Ukungena emininingwaneni ethe xaxa, ngokusobala futhi njengoba ngikwazile ukuqonda, kuma-prototypes okuqala ale divayisi yokugcina kwenziwa ngayo IHolmium, isici samakhemikhali esilungele kakhulu lolu hlobo lomsebenzi ngoba sinama-electron amaningi akwazi ukudala amandla kazibuthe aqinile ngenkathi efakwa ku-orbit esondele kakhulu enkabeni lapho evikeleke khona ngaphandle.
Ngokusho kweqembu eliphethe ukuthuthukiswa kwalo msebenzi, namuhla kusetshenziswa ama-athomu angaphezu kwe-100.000 ukugcina kancane, ngakho-ke ukunciphisa lolu hlobo lwezidingo kungaholela ekutheni sifeze izindawo ezincane zokugcina. Khumbula ukuthi sikhuluma, okwamanje, ngobuchwepheshe obuthi kusathatha isikhathi eside sentuthuko ukuthola umkhiqizo wentengiso othuthukiswayo.
Ukwaziswa okwengeziwe: Nature
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » Kuvele kungenzeka ukuthi kwenziwe amadrayivu anzima alingane ne-athomu
I-Android Nougat ifinyelela ukufakwa okungu-2.8% ngenyanga kaMashi